फागुनमा ‘कर्णाली उत्सव’ : कुडा कर्णालीका ! – Enayanepal.com
फागुनमा ‘कर्णाली उत्सव’ : कुडा कर्णालीका !
‘कुडा कर्णालीका’ भन्ने मुल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली उत्सव हुने भएको छ । कर्णालीलाई बहसमार्फत देशभर चिनाउने उदेश्यले कर्णालीमै पहिलोपटक यस्तो किसिमको कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो । कार्यक्रमको आयोजना सुर्खेतस्थित ऋति फाउण्डेसनले गर्न लागेको हो ।
३ दिन सम्म संचालन हुने उक्त कार्यक्रम फागुन दोस्रो साता संचालन गरिने ऋति फाउण्डेसनका संस्थापक सदस्य रेशम बिष्टले बताए ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, साहित्य, दर्शन लगायतका विभिन्न विधामा विमर्श र बहस गरिने कार्यक्रममा कर्णालीमै रहेका, कर्णालीकै बासिन्दा, कर्णालीभन्दा बाहिर रहेका कर्णालीलाई राम्रोसंग बुझेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहनेछ । चर्चित लेखक, साहित्यकार, बौद्धिक वर्ग तथा हजारौ साहित्यअनुरागी बिच जमघट र बहस गराउने उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
फागुन दोस्रो साता देशकै ध्यान कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने आयोजक संस्था ऋति फाउण्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष कमलराज लम्सालले बताए । ‘उत्सवले कर्णालीको वास्तविकता बारे बहसका साथै यहाँको सामाजिक चिन्तन, आर्थिक सम्भावनाहरुको खोजी, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनले भने, ‘कर्णालीबारे बास्तविकतालाई बाहिर ल्याउनुका साथै देशकै ध्यान कर्णालीमा तान्न हामिले यो उत्सवको आयोजना गर्दै छौं ।’
कर्णाली उत्सव तयारी समुहका सल्लाहकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यस्तो उत्सवले कर्णालीलाई चिनाउन थप सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै लेखक माधव चौलागाईले कर्णालीप्रतिको गलत मानसिकतालाई सकरात्मक बनाउन यस्तो उत्सव आवश्यक रहेको बताए ।
फागुन दोस्रो साता तीन दिन संचालन हुने कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर स्थित पर्यटकिय क्षेत्र बुलबुले उद्यान परिसरमा संचालन हुनेछ । कार्यक्रममा प्रवेश निशुल्क गरिएको छ । करिब पचास भन्दा बढि राष्टियस्तरमा चर्चित कर्णालीलाई बुझेका व्यक्तिहरु कार्यक्रममा वक्क्ताको रुपमा आउने आयोजकले जनाएको छ ।
खस सभ्यता र खस संस्कृतीलाई चिनाउने हेतुले कार्यक्रमका सेसनहरुका नाम राखिएको छ । खसका खासखुस, कर्णालीमा कालापहाडका तोणा, कर्णाली क्यानाम घुमेर हेर्दा, दवाइ र देउता भोक र भकारी, कर्णालीको एघारौं जिल्ला जस्ता विषयमा बहस हुनेगरी सेसनहरु निर्माण गरिएको छ । कार्यक्रम संचालनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र विभिन्न वित्तिय संसथाहरुको आर्थिक सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमका लागि ३५ लाख जति लाग्ने अनुमान गरिएको अायाेजकले जनाएकाे छ । ‘६० जना जति बौद्धिक व्यक्ति जो कर्णालीलाई चिन्नु हुन्छ, जान्नु हुन्छ उहाँहरुलाई हवाई भाडा, खाना र बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हुम्ला र डोल्पाजस्ता विकट जिल्लाबाट उहाँहरुलाई ल्याउँदा महंगो हवाई भाडा तिर्नुपर्ने हुँदा खर्च बढने हाम्रो अनुमान हो ।’ स‍स्थाका सदस्य रेशम विष्टले भने, ‘हामीलाई ३५ लाख लाग्छ की भन्ने अनुमान छ । यसकालागि केहि रकम नीजि क्षेत्र तथा अन्य रकम प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’